स्तन क्यान्सरले बुझाएको जीवनका फरक आयाम: ‘आमा बन्नु दूध खुवाउनु मात्र होइन रहेछ’ – ENEWSTECH
तस्बिर स्रोत, Janaki Chhetri
तस्बिर स्रोत, Misty Basnet
ललितपुरकी मिस्टी बस्नेतको स्तन क्यान्सर अनुभव भने क्षेत्रीको भन्दा केही भिन्न छ।
किमोथेरापी सुरु भएपछि कपाल झर्छ भन्ने उनले सुनेकी र देखेकी थिइन्। आफैले अनुभव गर्दा भने उनी निराश बनिन्। तालुबाट कपाल रित्तिँदै जाँदा उनी घण्टौँ ऐना अगाडि टोलाउँथिन्।
“कति राम्रो कपाल” भन्नेहरूले “कठै! सबै झरेछन्। अब पलाउँछ कि पलाउँदैन?” भन्न थालेका थिए।
प्रश्नले चिमोट्थ्यो। यथार्थले पनि उस्तै सताएको उनी बताउँछिन्।
“शारीरिक रूपमा गलेको थिएँ। मानसिक तनावहरू पनि उत्तिकै। लाग्थ्यो – क्यान्सर ठिक नभए कि मर्छु कि ‘पागल हुन्छु’ भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यो बेलामा सुन्दरताभन्दा ठुलो स्वास्थ्य थियो। एउटा स्तन काटेरै फाले पनि मलाई ठिक हुनु थियो। कस्ती देखिन्छु भन्ने कुराको मतलब थिएन,” उनी सुनाउँछिन्।
शल्यक्रिया, किमो र रेडियो थेरापी सकिएकै छ वर्ष पुग्यो। उनको कपाल पहिलेजस्तो कालो र बाक्लो भएर आएन तर जिन्दगी पुरानै लयमा फर्कँदै छ। लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा उनी हिँडेकी छिन्।
बेलाबेलामा विचलित पार्ने वचन वा घटनाक्रमको साक्षी हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थासँग जुध्नुभन्दा बेवास्ता गर्नु र अघि बढ्नु सहज लाग्छ उनलाई। क्यान्सर उनलाई रोक्ने बहाना बनेन। त्यसैले त उनी फेसन डिजाइनरका रूपमा स्थापित हुन सङ्घर्षरत छिन्।
क्यान्सर पराजित गरेर र्‍याम्प वाक
फेसन डिजाइनिङमा डिप्लोमा गरेकी उनी कपडालाई आकार दिन्छिन्, धागो र सिताराले बुट्टा भर्छिन्।
“सियो र धागो चलाउँदा मलाई थेरापी गरे सरह हुन्छ। केही घाउ समयले सिलाउँदै लग्ला। तर हरेक पटक कुनै लुगा सिलाइसक्दा मलाई भित्र कतै लागेको चोटमा मलहम लगाएजस्तै हुन्छ,” उनी सुनाउँछिन्।
मिस्टी ‘नयाँ उमङ्ग’ नामक समूहमार्फत स्तन क्यान्सरविरुद्ध अभियानमा समेत सक्रिय छिन्। यो चिकित्सक, नर्स र स्तन क्यान्सरविरुद्धको लडाइँ जितेकाहरूको समूह हो।
फेसन डिजाइनिङले उनलाई बुझायो- “कुनै एउटा रङ वा बुट्टाले लुगालाई राम्रो बनाउने होइन रहेछ। त्यसमा सिप र कला मिसिनु पर्छ।”
क्यान्सरले उनलाई बुझायो – “स्तन, कपाल वा छालाको रङले मानिसलाई सुन्दर बनाउने होइन रहेछ। उसमा आत्मबल र सकारात्मक ऊर्जा मिसिनु पर्छ।”
“मेरो आत्मबल, अठोट र ऊर्जा नै सबैभन्दा ठुलो सौन्दर्य हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो,” उनी भन्छिन्।
डा. प्रजापति क्यान्सरसँगै बिरामीमा कपाल पातलो र घुम्रिएको पलाउने, महिनावारी तलमाथि हुने, थकान र कमजोरी हुने, अधिकांशको एउटा अथवा दुई वटै स्तन काटेर फाल्नु पर्नेजस्ता शारीरिक परिवर्तन हुने बताउँछन्।
बिरामीमा डर, तनाव, चिन्ताजस्ता मानसिक परिवर्तन देखिनुलाई उनी स्वाभाविक मान्छन्।
“क्यान्सर भन्ने बित्तिकै प्राणघातक रोग हो भन्ने बुझाइका कारण पनि मनोसामाजिक परिवर्तनहरू देखिन्छन्। ती परिवर्तनसँग सामना गर्ने उचित तरिका नै औषधि उपचार र इच्छाशक्ति हो,” डा. प्रजापति भन्छन्।
“बिरामीलाई बिचरा महसुस गराउने कि सामान्य दैनिकीमा फर्कन मद्दत गर्ने भन्ने कुरा वरपरको वातावरण र व्यवहारमा भर पर्छ।”
स्तन क्यान्सर भएका बिरामीहरू पूर्ण स्वस्थ भएर जीवन यापन गर्न सक्ने भएकाले परिवार, साथीभाइ र आफन्तबाट कुशल मनोसामाजिक साथ र सहयोग दिन आवश्यक रहेको प्रस्ट्याए।
“रोग समयमा पहिचान हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तर बिरामीहरू शङ्का लागे पनि उपचारका लागि ढिला आउनु हुन्छ जसले गर्दा समस्या जटिल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ,” डा. प्रजापतिले भने।
तस्बिर स्रोत, Meena Bhattarai
मीना भट्टराई स्वास्थ्यकर्मी हुन्। स्तन क्यान्सरविरुद्ध उपचार गराइरहेकी उनलाई आफू अस्पताल जान ढिला हुनुको थकथकी रहेछ।
कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु हुँदा उनी रुपन्देहीको एक स्वास्थ्य चौकीमा सहायक स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा कार्यरत थिइन्। लकडाउन सुरु भएसँगै उनलाई आफ्नो दाहिने स्तनमा गिर्खा महसुस भयो। सङ्क्रमणको जोखिम उच्च थियो त्यसैले अस्पताल जान डराइन्। जब गइन् तब उनमा दोस्रो चरणको क्यान्सर पुष्टि भयो।
“अस्पताल पुग्न ढिला हुनुले रोग पहिचान गर्न पनि ढिला भयो,” भट्टराई सुनाउँछिन्।
“शङ्का लाग्न साथ गएको भए पहिलो चरणमै पत्ता लाग्न सक्थ्यो। उपचार केही सहज हुन्थ्यो होला।”
क्यान्सर खतरा: के गुलियो पेयले क्यान्सर गराउँछ
उनको स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया भएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन। उपचारको चरणमा केही अप्ठ्याराहरू भोग्नु परे पनि पुनः सक्रिय कर्मचारीका रूपमा कार्यालय धाउन थालिसकिन्। हाल उनी स्वास्थ्य विभागमा काजमा खटिएकी छिन्।
“मलाई किमो थेरापीले गलाउन खोज्दा समेत आत्मबलले जित्यो तर समाज र सोचसँग लड्न चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ,” उनले तीतो अनुभवको सङ्केत गरिन्।
किमो र रेडियो थेरापीका लागि भट्टराई काठमाण्डूमा नै बस्न पर्ने भयो। सुरुमा त चिनजानका एक जनाले आफ्नो घरमा कोठा दिने वचन दिएका रहेछन्। पछि अचानक ठाउँ दिन नसक्ने बताए तर कारण खुलाएनन्।
“चिनजानको सानो समूहमा मलाई कोठा नदिनुको कारण एक कान दुई कान मैदान भइहाल्यो। ‘क्यान्सर भएको मान्छेलाई राख्दा भोलि केही समस्या आइपरे कसले व्यहोर्छ?’ भन्ने चिन्ता परेछ उहाँहरूलाई। जे होस् रोगले पीडा मात्र होइन, मान्छे पनि चिनायो,” उनले सुनाइन्।
अहिले उनलाई लाग्छ – “बाँच्न पाउनु सबैभन्दा ठूलो अवसर हो।”
अक्टोबर महिनालाई विश्वभर ‘स्तन क्यान्सर जनचेतना महिना’को रूपमा मनाइन्छ।
महिलासँग सम्बन्धित शारीरिक समस्या खुलेर कुरा नहुने नेपाली समाजमा यी पात्रहरू कथा र आवाज बोकेर सचेतनाका लागि बाहिर आएका छन्।
स्तन क्यान्सर जितेका यी प्रतिनिधि पात्रहरू समस्या महसुस हुनासाथ तदारुकता देखाउनु पर्नेमा सहमत देखिन्छन्।
भट्टराई भन्छिन्, “स्तन पनि शरीरको अरू अङ्ग जस्तै त हो। स्तनमा समस्या देखिँदा लजाउनु वा नखुल्नुले घाटा हुनसक्छ।”
“समयमा उपचार गर्न सके जीवनका फरक आयाम देख्न पाइन्छ।”
स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने कसरी?
चीन: ताइवानलाई ‘पुन: एकीकरण’ गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वाचा